အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းနှင့်အတူခနောက်စိမ်း Ingots China Manufacturers & Suppliers & Factory
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းနှင့်အတူခနောက်စိမ်း Ingots - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
(9များအတွက်စုစုပေါင်း အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းနှင့်အတူခနောက်စိမ်း Ingots ထုတ်ကုန်များ)
မော်ဒယ်နံပါတ်။: SB 99.90%MIN SB 99.85%MIN SB 99.65%MIN
ခနောက်စိမ်းအရောင်နဲ့ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့အစိုင်အခဲအဖြူရောင်ငွေရောင် nonferrous သတ္တုတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာ, ဖြစ်ပါတယ်။ တိကျတဲ့: SYMBOL CHEMICAL ELEMENTS(%)...
ခနောက်စိမ်း Ingots 7440-36-0 99,65% အောင်မင်း
ခနောက်စိမ်းဟာအသုံးအများဆုံး nonferrous သတ္တုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ စင်ကြယ်သောခနောက်စိမ်းခဲတစ်ဦးတည်းကိုအသုံးပြုသည်။ electroplating အပြင်, ကမကြာခဏသည်အခြားသတ္တုများအပေါ်အခြေခံပြီးသတ္တုစပ်ဖွဲ့စည်းရန်အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာသွယ်ဝိုက်နည်းလမ်းအားဖြင့်ခနောက်စိမ်းအဖြူရောင်ထုတ်လုပ်များအတွက်ကုန်ကြမ်းဖြစ်ပါတယ်။ တိကျတဲ့: SYMBOL CHEMICAL...
မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ် Antimony Ingots (SB) 99.65%
ခနောက်စိမ်းသည်ငွေရောင်တောက်ပနှင့်ထို့ကြောင့် 3. တစ် mohs ခိုင်မာသောနဲ့မီးခိုးရောင်သတ္တုဖြစ်ပါသည်, စင်ကြယ်သောခနောက်စိမ်းခက်ခဲအရာဝတ္ထုအောင်ဖို့အသုံးပြုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး တိကျတဲ့: SYMBOL CHEMICAL ELEMENTS(%) Sb(min)(%)...
မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ် Antimony Ingots (SB) 99.9%
ခနောက်စိမ်းတစ်အတော်လေးတည်ငြိမ်သတ္တုတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အဆိုပါပြဌာန်းခွင့်အရ, 100 ~ 250 ℃၏အကွာအဝေးအတွင်းအပူလာသောအခါအဘယ်သူမျှမထင်ရှားသောဓာတ်တိုးဖြစ်ရပ်ဆန်းနေဆဲရှိသေး၏။ ခနောက်စိမ်းပျော့နှင့် Hydrochloric acid နှင့်စုစည်း hydrofluoric အက်ဆစ်ထဲမှာရေထဲမှာပျော်ဝင်နိုင်ခြင်းနှင့်တည်ငြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ တိကျတဲ့: SYMBOL CHEMICAL...
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း CAS 7440-36-0 နှင့်အတူခနောက်စိမ်း ingots
သတ္တုခနောက်စိမ်း၏ဖွဲ့စည်းပုံအလွှာ (အာကာသအုပ်စုတစ်စု: R3m အမှတ် 166) ဖြစ်ပြီး, အသီးအသီးအလွှာတစ်ဦးချိတ်ဆက်ခွံခြောက်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးလက်စွပ်ဖွဲ့စည်းပုံပါရှိသည်။ အနီးဆုံးနှင့်နောက်အနီးကပ်ဆုံးခနောက်စိမ်းအက်တမ်တစ်ဦးပုံပျက်သော octahedron...
မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ် Antimony Ingots
စုစည်းထံမှဆာလဗျူရစ်အက်စစ်အတွက်ပျော်ဝင်, aqua regia အတွက်အဲဒီပျော်ဝင်နိုင်တဲ့။ ဆွေမျိုးသိပ်သည်းဆ 6,68, အမှတ် 1635 ℃, အနုမြူဗုံးအချင်းဝက် 1.28 တစ်ဦးက, နည်းပညာများဖြင့် 2.2 ဆူပွက်, အမှတ် 630 ℃အရည်ပျော်။ တိကျတဲ့: SYMBOL CHEMICAL ELEMENTS(%) Sb(min)(%)...
မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ် Antimony Ingots (SB) 99.65% အောင်မင်း
၎င်း၏ဂုဏ်သတ္တိများရန်, ခနောက်စိမ်းခဲ electroplating မှလွဲ. တစ်ဦးတည်းကိုအသုံးပြုသည်နှင့်မကြာခဏခိုင်မာသောနှငျ့ခှနျအားတိုးမြှင့်ဖို့နဲ့အခြားသတ္တုအပေါ်အခြေခံပြီးသတ္တုစပ်အမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးပြုသည်။ တိကျတဲ့: SYMBOL CHEMICAL ELEMENTS(%) Sb(min)(%)...
မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ် Antimony Ingots 99,65% အောင်မင်း
ခနောက်စိမ်းတစ်ဆတ်ငွေအဖြူရောင်တောက်ပသတ္တုတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ သွန်းသောခနောက်စိမ်းတဖြည်းဖြည်းအအေးသောအခါသတ္တုခနောက်စိမ်းအာဆင်းနစ်များမီးခိုးရောင် allotrophics မှတသားတည်းဖြစ်ကြောင်း trigonal crystals သို့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် တိကျတဲ့: SYMBOL CHEMICAL ELEMENTS(%) Sb(min)(%)...
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းနှင့်အတူခနောက်စိမ်း Ingots ရောင်းမည်ခနောက်စိမ်း Ingots အပြာရောင် Tungsten စျေးနှုန်းခန့်မှန်းချက် အောင်စလျှင်ခနောက်စိမ်းစျေး အောင်စလျှင်ခနောက်စိမ်း trioxide စျေး ရောင်းမည်ခနောက်စိမ်း တိုက်ခန်းစျေးနှုန်းဇယား tungsten Amt စျေးနှုန်းခန့်မှန်းချက်
အပြာရောင် Tungsten စျေးနှုန်းခန့်မှန်းချက်
အောင်စလျှင်ခနောက်စိမ်း trioxide စျေး